DAAWO:Somaliland oo dagaalkii ugu cuslaa isku diyaarinaysa, Ciidamo kusii qul qulaya jiidaha hore Iyo Puntland oo ku dhawaaqday in ay…. – Puntlandtimes
CEERIGAABO(P-TIMES)- Xaalada gobolka Sanaag ayaa ah mid aan deganayn, waxaana halkaasi saacadihii ugu dambeeyey kusii qulqulayey cutubyo katirsan ciidamada maamulka Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka.
Ciidamadan laga soo diray Hargeysa oo soo gaadhay Ceerigaabo ayaa la sheegay inay tagi doonaan deegaano katirsan gobolka Sanaag, waxaana ay goosteen wadooyinkii isku xidhi jiray degmooyinka Ceerigaabo, Yubbe iyo Hadaaftimo ee gobolka Sanaag.
Dhinaca kalena masuuliyiin katirsan Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Badhan ayaa ku dhawaaqay in Puntland aysan dagaal ka fursan doonin hadii aysan Somaliland joojin daan daansiga ay kawado gobolka Sanaag sida ay hadalka u dhigeen.
Somaliland ayaa ku andacoonaysa in ay ka cabsi qabto weeraro kaga yimaada Jabhadda Caarre ee fadhiisinka kuleh duleedka degmada Qardho ee xarunta gobolka Kar kaar oo dhowr jeer xitaa masuuliyiin dowladeed ka qabatay maamulka Somaliland.
Muuse Biixi ayaa amar ku bixiyey in ciidamadiisu ay isku balaadhiyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana gudaha Hargeysa ka socda kulamo kala duwan oo u dhaxeeyey saraakiisha ciidamada Somaliland iyo Muuse Biixi oo laga yaabo in uu socdaal dhanka dhulka ah ku tago deegaanada ay qabsadeen ciidamadiisu.
weli ma niicdii baad wadaa ?
Wiil Bosassood says:
Gurxan waxa tahay Aaran Jaan urahaya. Adiga Aaran Jaan uu dagaalan aniga ma uu dagaalamahayo Aaran Jaan.
Kuwan mana dagalamaan dhuusana ma dayaan kkkk adeerayaaloow ama dagalaama sida raga wax iska dhiciya ama naga aamus oo dhuusada naga yareeyaa sidii haweenkii uunbaa niicda haysaane!